म पनि रुकमान्तरको विरोधी हुँ :: रामशरण महत , अर्थमन्त्री – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०६:०१ English
म पनि रुकमान्तरको विरोधी हुँ :: रामशरण महत , अर्थमन्त्री
० तपाईंले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएकै बेला जेठ मसान्तभित्रै जसरी पनि बजेट ल्याउने वाचा गर्नुभएको थियो, त्यो त नसक्ने हुनुभयो नि ?
– जसरी पनि ल्याउँछु भनेर त मैले भनेको थिइनँ, बरु जेठ मसान्तसम्ममा बजेट प्रस्तुत गर्ने हाम्रो योजना छ चाहिँ भनेकै हुँ । तर, त्यो योजना अब पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
० किन नसक्ने हुनुभयो त ?
– नेपालमा यो एउटा विडम्बनाकै विषय बन्न पुगेको छ कि हामी स–साना विषयलाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रको विकास–निर्माणमै नकारात्मक असर पर्ने कदम चाल्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनौँ । यो हामी राजनीतिक दल वा नेताहरूको एउटा प्रचलनजस्तै भइसक्यो । बजेट जेठभित्र आउन नसक्ने हुनुको कारण पनि यस्तै छ, बजेट रकमान्तर गरेको भनेर माओवादीहरूले जो हङ्गामा गरे, यो जरुरी नै थिएन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने विषय पनि उनीहरूको छ, जुन विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्न सुहाउने कुरै थिएन । राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेताहरू बसेर मिलाउने कुरा थियो त्यो, सरकारलाई प्रहार गर्ने विषय नै थिएन त्यो । यसरी राजनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान हुने विषयलाई सदनमा ल्याएर तमासा गरियो । सदन रोकियो, जसले गर्दा जेठभित्र बजेट ल्याएर समयमै आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने सरकारको नीतिमा धक्का पुर्‍याइयो ।
० तपाईंले जथाभावी बजेट रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्नुभएको भन्ने आरोपचाहिँ के हो नि ?
– यो पनि बुझ्दैनबुझी थेत्तरो तालले उठाइएको कुरा हो । रकमान्तर भनेको कानुनले दिएको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । रकमान्तर नगर्ने हो भने विकास–निर्माण अवरुद्ध हुन सक्छन् । कतिपय योजनामा रकम खर्च नभएको हुन्छ भने कतिपय योजनामा रकम नपुगेको हुनसक्छ । बढी भएको योजनाबाट नपुगेको योजनामा सार्नका लागि कानुन बनाएरै रकमान्तरको व्यवस्था गरिएको हो । यो संसारभर चलेको व्यवस्था हो र नेपालमा पनि चलिआएकै हो । रकमान्तर नगरेको भए उपनिर्वाचन गर्न बजेट नपुग्ने अवस्था थियो, प्रहरीले रासन–तलब खान नपाउने अवस्था निम्तिँदै थियो, आर्मीको रासनलाई पनि समस्या पर्ने थियो, काठमाडौंका सडक अधुरै रहने अवस्था आउँदै थियो, कैयन अन्य विकास योजना अवरुद्ध हुने थिए । त्यसैले अति आवश्यक परेर मात्र रकमान्तर गरिएको छ, आरोप लगाइएजस्तो कसैका कार्यकर्ता पोस्न जथाभावी रकमान्तर गरिएको होइन । स–साना कुरामा अनियमित रूपमा जथाभावी पैसा बाँड्ने कुराको चाहिँ म पनि विरोधी हुँ, पहिले मैले पनि विरोध गरेको थिएँ र भोलि पनि त्यस्तो प्रवृत्ति या शैलीको विरोध गर्ने नै छु ।
० तपाईंले आफ्नो जिल्लामा आफ्नो चुनाव क्षेत्र नै फोकस गरीकन दर्जनौँ योजनामा रकमान्तर गर्नुभयो भनी विपक्षीले भनेको कुरा आरोप मात्र हो त ?
– आरोप मात्र नभई यो त निकै घटिया खालको आरोप हो । मैले आफ्नो जिल्ला या क्षेत्र ताकेर कुनै योजनाका लागि रकमान्तर गरेको छैन । सदनमा सबै कुरा प्रस्ट्याउन खोज्दा बोल्ने मौका नै दिइएन । देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न योजनामा रकम गएका होलान्, तर त्यो स्थानीय आवश्यकता र मागअनुसार पहिले नै निर्धारण भएका योजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट रकम जाने हो । अर्थ मन्त्रालयबाट मैले एउटै योजनाका लागि पनि रकम पठाएको छैन, पठाउने त के, आफ्नो क्षेत्र फोकस गरेर एउटै सिफारिससम्म पनि गरेको छैन मैले । जुन मन्त्रालयले पठाएको छ, त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले दिने हो । अर्थ मन्त्रालयले त माग भएअनुसार बजेट छुट्याइदिने हो, खर्च गर्ने त सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै हुन्, क–कसले कहाँ–कहाँ कसरी खर्च गर्छन् ती सबको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिने हो र ?
० कैयन काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको हातमा रकम पुग्ने गरी बाँड्नुभयो भन्ने आरोप छ त ?
– आरोप भनेको त आरोप नै हो, विपक्षीले अनेक नियतले यस्तो आरोप लगाउन सक्छन्, मिडियाले सत्य–तथ्य बुझ्ने कोसिस नै नगरी आरोपलाई सत्य नै हो भने जसरी प्रचार गर्न त मिल्दैन नि । यो मुलुकमा राजनीतीकरण बढ्ता भयो । यसले सबै कुरा बिगार्‍यो ।
० वर्षको अन्त्यमा यसरी रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ त, सही किसिमले बजेट प्लानिङ हुन नसकेरै होइन र ?
– हो । त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा विचार पुर्‍याएर गरिनुपर्छ, हचुवा तालले काम गर्न खोज्दा यस्ता समस्या धेरै आउन सक्छ । म पनि यस्तो प्रवृत्तिको विरोधी हुँ । आगामी दिनमा रकमान्तरको आवश्यकता नपर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सम्बन्धित सबैले सचेत रहनुपर्छ । तथापि, जतिसुकै विचार गरिए पनि भैपरी आउने आवश्यकताको अन्त्य नहुन सक्छ । यो जहिलेसुकै पनि आइपर्ने कुरा हो । जसरी घरमा कतिबेला पाहुना आउँछन्, छुट्याएको घरखर्चमा के–कति थपघट हुने हो भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन, देशको बजेटमा पनि त्यस्तै परिस्थिति आउन सक्छ । अनि रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । रकमान्तर पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, आवश्यक परेरै गर्नुपर्ने रकमान्तर एउटा हुन्छ भने अर्कोचाहिँ बजेट खर्च नभई बेला बित्न लाग्यो, अब यसलाई जसरी पनि खर्च गरी सिध्याउनुपर्‍यो भनेर जथाभावी दुरुपयोग गर्नका लागि गरिने रकमान्तर । यस्तो जथाभावी गर्ने प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्नैपर्छ । बजेटभन्दा बाहिर गएर रकमान्तर नहोस्, रकमान्तर दुरुपयोग नहोस् भन्ने पक्षमा चाहिँ सधैँ सबै सचेत रहनैपर्छ ।
० सदनमा तपाईंमाथि यत्रो आरोप किन लाग्यो होला त ?
– अर्थसम्बन्धी बुझ्दै नबुझेका कतिपय सांसदलाई आफ्नो स्वार्थवश कसले के चिर्कटो थमाइदियो, त्यसैका आधारमा ती सांसद संसद्मा कुर्लिए । मैले तथ्य प्रस्ट्याउन खोज्दा बोल्ने मौकै दिइएन । मैले कुनै गल्ती गरेको पनि छैन र ममाथि तथ्यगत आरोप केही लागेजस्तो अनुभूति पनि मलाई भएको छैन । आजका जनता त्यति लाटा पनि छैनन् कि जसले जे आरोप लगायो त्यसैलाई पत्याएर बस्ने ।
२८ जेष्ठ २०७१, बुधबार २१:४१ मा प्रकाशित